Ukutyala imali kwiNtengiso ye-Cryptocurrency Market: Iinketho ezimbini ezinokuthenjwa
Ukuhlaziywa: 29 Septemba 2021
Njengomzi mveliso we-imali yedatha uqhubeka ukongeza iimali ezintsha mihla le, kuye kusiba nzima ukukhetha ukhetho olulungileyo lwe-crypto. Ngelixa zonke ii-asethi ze-crypto zizithuthi ezilungileyo zokuqikelela, ayizizo zonke ezifanelekileyo kutyalo-mali lwexesha elide.
Kule nqaku, siza kuthatha i-foray emfutshane kwizinto ezimbini ezithembekileyo ze-crypto-asethi kwishishini; I-Binance Coin (BNB) kunye ne-Uniswap (UNI).
I-Binance, iqonga lomgcini we-BNB, yeyona ndawo yentengiso ye-crypto emhlabeni namhlanje. Oko kwathiwa, ukutyala imali kwiBinance Coin kufana nokutyala imali kwisitokhwe seBinance. Ndihleli kwindawo yesithathu phezulu cryptocurrency inqanaba, i-BNB irekhode ukunyuka kweemeteor kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, enkosi ekusebenzeni komhlaba kotshintshiselwano.
Kwakhona, iBinance Coin ngamanye amaxesha isebenza njenge "Imali engaphakathi komdlalo" ovuza abasebenzisi ngexabiso elingcono kwiintengiselwano zabo xa behlawula nge-BNB. Oku kunika ithokheni ngohlobo lwexabiso lemali yokwenyani kwaye ikwasebenza njenge "Uzivalele" kubarhwebi abasebenzisa iqonga.
Ngaphandle kokubandezeleka ngenxa yokuxinana kwabasemagunyeni kulawulo lwehlabathi, uBinance uyaqhubeka nokuziqhelanisa nemozulu kunye nokuqhubela phambili. Inkampani ikwabonakalisile ukuba ikulungele ukuphazamisa ukusebenza kwayo ukugcina ukhuphiswano kunye nokukhokelela kwinzuzo, ukuyenza ukuba ibe sisithuthi esithembekileyo sotyalo-mali.
Umzekelo wokuphazamiseka kwenzeke emva kokufika kotshintshiselwano olusemthethweni (i-DEX), egrogrisa imodeli yayo yeshishini. Inkampani ye-behemoth crypto ikhawuleze yasungula i-Binance Smart Chain (BSC), ivumela abaphuhlisi ukuba benze iiprojekthi ezintsha ezinikezelweyo kwaye baququzelele ukuthengiselana okukhawulezayo kunye nexabiso eliphantsi, ukugcina ukubaluleka kwemakethi.
Ngala manqaku, uqala ukuqonda ukuba kutheni i-BNB iyindlela yotyalo-mali ephambili kolu shishino lukhula ngokukhawuleza.
Ukungaguquguquki yeyona projekthi yorhwebo yenziwa ngokusezantsi (DEX), ngaphandle kokungena kade kwisithuba. Ukungatshintshi kusebenza njengesixhobo esithembekileyo kubasebenzisi "Tshintsha" umqondiso omnye komnye ngendlela yokwabiwa ngokusemthethweni, xa kuthelekiswa notshintshiselwano oluphakathi njengeBinance.
Ukuphehlelelwa kwe-Uniswap V3 ngoMeyi kwavula iingcango zemisebenzi engcono yokubolekwa kwamaQela okuBolekisa (abenzi bemakethi). Ukusukela oko kuphehlelelwa, i-Uniswap ikhule ukusuka kwi-1.6 yezigidi zabasebenzisi ukuya ngaphezulu kwe-2.7 yezigidi zabasebenzisi kwiinyanga ezine.
Imarike yemali yeDijithali engazinzanga: Inkxalabo esisiseko
Umgaqo obalulekileyo ekufuneka ulandelwe xa utyala imali kukukhangela imveliso esombulula ingxaki yokwenyani kwaye ilawule oontanga bayo. I-Uniswap kunye neBinance Coin zizalisekisa zombini iimfuno.
Nangona kunjalo, abatyali mali kufuneka balindele kwaye bathathe amanyathelo okhuseleko ngokuchasene nokuguquguquka okungaguquguqukiyo, okwenzeka rhoqo kwishishini le-crypto. Ukungatshintshi liqela elinetyala ngakumbi kule ntshukumo yentengiso.
tags IChinance Coin, Cryptocurrency, utyalo, Review, UNISWAP
U-Binance uza phantsi koPhando kwi-CFTC ngaphezulu koLawulo lweNtengiso
Ukuhlaziywa: 19 Septemba 2021
I-Binance iyaqhubeka nokuwela kwicala elingalunganga nabasemagunyeni kulawulo kwihlabathi liphela, ngaphandle kwemizamo eyandileyo yokuziqhelisa. Iingxelo zibonisa ukuba abasemagunyeni base-US baphanda utshintshiselwano nge-behemoth ye-cryptocurrency yokurhweba ngaphakathi kunye nokuthengisa ngobuqhetseba.
Ngelixa le probe intsha ivela kwiKhomishini yokuRhweba ngeeNkqubela phambili zeXesha elizayo (i-CFTC), iSebe lezoBulungisa (i-DOJ) kunye neNkonzo yangaphakathi yeNgeniso (IRS) bobabini banophando kwimicimbi eyahlukeneyo ngokuchasene neBinance.
Bloomberg uxele ngolwe-Sihlanu ukuba abasemagunyeni kulawulo lwase-US baphanda i-Binance malunga nokuthengisa ngaphakathi kunye nokusetyenziswa gwenxa kweemarike ukumisela ukuba inkampani okanye inzuzo yabasebenzi ngokuxhamla abathengi bayo. Ethetha ngomba, uBinance uqaphele ukuba:
"EBinance, sinomgaqo-nkqubo wokunganyamezeli urhwebo ngaphakathi kunye nekhowudi yokuziphatha engqingqwa enxulumene nalo naluphi na uhlobo lokuziphatha olunokuba nefuthe elibi kubathengi bethu okanye kumzi mveliso."
Ingxelo kaBloomberg ikwaveze ukuba abaphandi beKhomishini yoRhwebo lweHlabathi yezoRhwebo baye bafikelela kumangqina aliqela anokubakho kwezi veki zimbalwa zidlulileyo. I-CFTC sele inephenyo elindile eliphanda ukuba ingaba i-Binance ivumela abahlali base-US ukuba bathenge okanye bathengise izinto eziphuma kwi-Bitcoin kunye noku-odola i-crypto derivatives, leyo umzimba uyibona ingekho semthethweni ithathela ingqalelo ukuba i-Binance ayibhalisanga nayo.
I-DOJ kunye ne-IRS baphanda nge-Binance ngaphezulu kokuGunyazwa kweMali kunye nokuhlasela kweRhafu
Okwangoku, iBloomberg ixele ukuba iSebe lezoBulungisa laseMelika kunye neNkonzo yangaphakathi yeNgeniso kutshanje iphehlelele uphando olwahlukileyo lolwaphulo-mthetho ukuqinisekisa ukuba utshintshiselwano olukhulu lusebenza njengesixhobo sokuhambisa imali kunye nokubaleka ukuhlawula irhafu.
Oko kwathethileyo, inkampani ayinasityholo siqinisekileyo sokwenza okungalunganga, kwaye olu phando alunakho ukukhokelela nakweziphi na izenzo zomthetho okanye ezisemthethweni.
Ngakumbi nangakumbi abalawuli kwihlabathi liphela bayaqhubeka ukukhupha izilumkiso ngokuchasene neBinance ngokusebenza ngokungekho mthethweni kwiindawo zabo. Oku kubandakanya abalawuli e-UK, Japan, Thailand, Malaysia, Hong Kong, Singapore, Netherlands, Germany, Lithuania nase Mzantsi Afrika.
tags Binance, Cryptocurrency, iindaba, Umlawuli waseMelika
UBinance Ufumana Isilumkiso esivela kwiBhanki yaseLithuania Phakathi kwabanye
Ukuhlaziywa: 17 Julayi 2021
Ibhanki yaseLithuania, eyona bhanki iphambili yaseLithuania, ijoyine uluhlu olukhulayo lwabasemagunyeni ukuze babambelele kwiBinance, olona tshintshiselwano lukhulu lwe-imali yedatha.
Kutshanje ibhanki ikhuphe isilumkiso kwi-Binance UAB malunga neenkonzo zotyalo-mali ezingabhaliswanga ezinikezwe eLithuania. Ibhanki nayo "Iyalele inkampani ukuba iqinisekise ukuba ulwazi olufumanekayo eluntwini alulahlekisi."
Ibhanki ephezulu iqaphele ukuba ivavanye idatha ekhoyo esidlangalaleni kwaye yafumanisa ukuba iBinance "Osebenza njengesixhobo sokutshintshiselana ngemali kunye nomphathi wesikhwama semali esibonakalayo" eLithuania. Ibhanki ichaze ukuba:
"I-Bhanki yase-Lithuania ithethe ne-Binance UAB… kwaye yalumkisa inkampani malunga neenkonzo zayo ezingekho mthethweni zotyalo-mali ezibonelelwe eLithuania kwaye yayicela ukuba iqinisekise ukuba ulwazi olukhoyo esidlangalaleni luyahambelana neemfuno zomthetho kwaye alulahlekisi."
Ukongeza, ibhanki ikwaqaphele loo nto "Iinkonzo ezinxulumene ne-crypto-asethi azilawulwa okanye zibekwe esweni ngaloo ndlela abathengi babeka emngciphekweni wokuphulukana nolondolozo lwabo."
I-Binance Phantsi koMlilo kumaQumrhu aManyeneyo oLawulo
I-Bhanki yaseLithuania yongeze ukuba ezinye i-intanethi zokutshintshiselana nge-intanethi zivumela abasebenzisi babo ukuba batyale imali kwiziphumo ze-crypto (ezinje ngekamva kunye nokukhetha), iikhontrakthi zomahluko (CFD), ukhuseleko olunxibelelene ne-cryptocurrency. Ibhanki iqinisekisile ukuba ezi ziphathwa njengezixhobo zemali, kwaye amaqonga azibonelelayo kufanele ukuba afumene iilayisensi njengababoneleli beenkonzo zemali.
Nangona kunjalo, ibhanki iqaphele ukuba: "Iinkampani ezibhaliswe eLithuania njengabanikezeli bemali abanganyanyekelwa njengababoneleli beenkonzo zemali," Yongeza ukuba:
"Kananjalo abanalungelo lokubonelela ngeenkonzo zezemali, kubandakanya neenkonzo zotyalo-mali."
Ngeli xesha, i-Itali ikhuphe isilumkiso esifanayo ku-Binance ngoMvulo Abalawuli e-UK, Japan, Cayman Islands, naseThailand bakhuphe izaziso ezilumkisayo kutshintshiselwano nge-crypto. Njengekhawuntara, uBinance unqumle ukurhoxiswa kwe-GBP kunye needipozithi ze-EUR ngokudluliselwa kweebhanki ze-SEPA.
Unokuthenga iingqekembe ze-crypto apha: Thenga amathokheni
tags Binance, Cryptocurrency, Lithuwaniya, iindaba
Umzi mveliso weBinance kunye neCrypto uza phantsi kweNkxalabo eNkulu yoLawulo
Ukuhlaziywa: 15 Julayi 2021
Njengoko i-Binance iphantsi koxinzelelo kulawulo, imboni ye-cryptocurrency ithathe i-plunge ngoLwesine njengoko uxinzelelo lommiselo kwihlabathi liphela liqina. Ngexesha lokushicilela, i-Bitcoin kunye ne-Ethereum zombini ziphantsi nge-4%, njengoko yonke imakethi yopha.
Kwangoko namhlanje, umlindi wentengiso wase-Italiya uConsob uxele ukuba iBinance, eyona ndawo inkulu yokutshintshiselana nge-cryptocur lwemali ngokwevolthi yokuthengisa, yayingelilo igunya e-Itali kwaye akufuneki yenze imisebenzi elizweni.
Umlindi wongeze ukuba ngoJuni, ukwanda okungalawulekiyo kweemali zokukhuphela imali kwakungumthombo wexhala kunye nexhala, elumkisa abemi ukuba “Balumke kakhulu” xa uzibandakanya neeasethi ze-crypto.
I-Binance ayifakwanga yi-Consob Saga
Nangona kunjalo, isithethi seBinance sichaze iReuters ukuba iwebhusayithi yotshintshiselwano ayisebenzi e-Italiya kwaye isaga yeConsob ayinampembelelo ngqo kwishishini layo.
Okwangoku, inkampani yeselfowuni iT-Mobile ngoku ijongene nesimangalo esitsha emva kokuba isilele ukukhusela kwisikrelemnqa seSIM esikhokelele kwilahleko ye- $ 55k kwiBitcoin kumthengi omnye.
Ummangali uRichard Harris uqaphele ukuba indlela yokuziphatha gwenxa kweT-Mobile ibandakanya ukungakwazi kwayo ukukhusela ngokufanelekileyo ulwazi lwabathengi kunye nokuqesha abasebenzi abaneleyo benkxaso.
Kwezinye iindaba, iFrance iphakamise kutshanje ukuba oorhulumente be-European Union mabaxhobise abasemagunyeni be-pan-European, i-European Securities and Markets Authority (i-ESMA) ese-Paris, endaweni yabalawuli bemveli.
Umlawuli weemarike zaseFrance ngokunyanzelekileyo ukuba i-ESMA inikwe igunya elingaphezulu lokulawula ishishini le-crypto.
I-Emirates NBD, eyona bhanki inkulu eDubai, ilumkise abathengi bayo ngokuchasene notyalo-mali kwiBitcoin okanye ezinye iimali zedijithali, iqaphela ukuba azitshintshi.
Kudliwanondlebe noShishino lwaseArabia, uGeorgio Borelli, intloko yolwabiwo lweasethi ye-Emirates NBD iqaphele ukuba:
"Eli nqanaba liphezulu lokungazinzi kuya kufuneka lihle kakhulu ukuze i-cryptocurrensets yamkelwe jikelele kuluntu lwethu, ukuze abaphathi beepotfoliyo bamkele ii-cryptocurrensets kwiipotfoliyo zabo nakubatyali mali, ngokubanzi, ukuze bakwazi ukunika ixabiso elifanelekileyo kubo."
tags Binance, Bitcoin, Cryptocurrency, iindaba
Isicwangciso esiliqili seCrypto Investment-Icandelo 1
Ukuhlaziywa: 18 Juni 2021
ISICWANGCISO-QHINGA SOTYALO-MALI KWEXESHA ELide
"… I-Cryptoassets yayiyeyona nguqulelo ibalulekileyo yeziko ukusukela kwiNguquko yezeMizi-mveliso kwaye ibimele utyalomali lobomi bonke." -U-Van K. Tharp, PhD
Luthini uluvo? Zeziphi iingqekembe ze-crypto ekufuneka uzithengile?
Umzekelo, unokufuna ukutyala imali kwiithokheni ezithandwayo zeDeFi.
NgokukaJohn Hargrave, kuninzi lweeprojekthi zeDeFi, umaleko yi-Ethereum. Njengoko esitsho kaninzi, eyona ndlela ilula yokutyala imali kwiDeFi kukuthenga nokugcina i-Ether. Sisiseko seDeFi, kwaye sisiseko sepotifoliyo yotyalo-mali yeDeFi.
Nangona kunjalo, iingqekembe zeDeFi ezithandwayo zisebenza ngeenjongo ezizodwa kwaye zinokuhambisa imbuyekezo enkulu kwixa elizayo. Ke ngekhe ufune ukuthintela amathuba akho kwi-ETH kuphela. Ewe kukho amathuba amakhulu okwenza imali kwezinye iingqekembe.
Enye yeethokheni zeDeFi ezibalaseleyo yi-Uniswap (UNI), eyenziwe nguHayden Adams ngo-Novemba ka-2018. Ukusukela ngoSeptemba 2020 ukuya ngoMeyi 2021, i-UNIUSD inyuke isuka kwi- $ 4 yaya kwi-44 yeedola. Kodwa sisiqalo nje eso, kuba amaxabiso aya kunyuka aphume apha, elandela ulungiso olukhulu lwamva nje. Ukungaguquguquki kuququzelela intengiselwano ezenzekelayo phakathi kweethokheni ze-cryptocurrency kwi-Ethereum blockchain ngokusebenzisa isivumelwano se-smart contract. Kwiminyaka engama-40 ukuza kuthi ga ngeli xesha, i-UNIUSD iya kufaneleka ubuncinci i $ 400,000.
Lo ngomnye wemizekelo emininzi. Kuya kufuneka ukhombe i-cryptos enexabiso eliza kunyuka liye phezulu ngokukhawuleza kwixesha elizayo.
UKUFUMANA I-UNICORN Elandelayo
Thenga zonke ezona ngqekembe ziphambili ze-100.
Jonga ezona ngqekembe ziphezulu zili-100. Ziyi-100 ezona ngqekembe zikhulu ehlabathini ngoqoqosho lwentengiso. Oko kuthetha ukuba ngoku bayathandwa, kwaye kukwathetha ukuba abantu abaninzi batyale imali kuzo.
Uninzi lweengqekembe ze-100 eziphezulu ziyathembisa, zineenjongo ezintle kunye nekamva eliqaqambileyo.
Kuxhomekeka kwisimo sakho sezemali, unokutyala imali eyi- $ 1000 kwingqekembe nganye, wenze i $ 100,000 iyonke.
Okanye ungatyala imali eyi- $ 100 yeedola kwimali nganye (eyi- $ 10,000 iyonke), okanye ungatyala imali ezi- $ 10 kwingqekembe nganye (iyonke eyi- $ 1000).
Bamba iingqekembe unaphakade.
Nokuba imali ibiza kangakanani, njenge-Yearn. Ezezimali (i-FI) okwangoku ejikeleze i- $ 39,658, kodwa eyathi yafikelela kwinqanaba eliphezulu le- $ 90,000. Yithenge.
Nokuba ithini na ingqekembe ngexabiso eliphantsi, njenge-SHIBA INU (SHIB) ekungoku eyi- $ 0.000007151, kodwa eyathi yafikelela kwinqanaba eliphezulu leedola eziyi-0.000040151. Yithenge.
ISIGQIBO SOKUGQIBELA SEZIINGQOQO EZINGU-100
Ezinye iingqekembe ziya kuba kukungaphumeleli, kwaye ezinye iimali ziya kuba yimpumelelo yokugquma. Ezinye iingqekembe ziya kwenza ngaphezulu kokulindeleyo kwaye ezinye ziya kwenza ngezantsi kokulindelweyo. Ezinye iingqekembe aziyi kwenza mali kakhulu okanye zilahle imali kakhulu.
Kwisithuba seminyaka emi-2 okanye emi-5 okanye iminyaka eli-10 okanye iminyaka engama-20, ezinye zeengqekembe ezikhoyo okwangoku kwi-100 ephezulu ngeza zatyhalelwa ngaphandle kwezingaphezulu kwe-100, kwaye ezinye zaziya kuhlala zingaphezulu kwe-100. okanye i-50 ephezulu ibiya kutyhalwa iye kwi-80 ephezulu.
Ngeli xesha, ezinye zeengqekembe ezazingathandwa ngoku zaziza kuba ngamagama emizi, kwaye ziphumelele kakhulu.
Kwelinye icala, ezinye iingqekembe beziza kuthi shwaka okanye zingabi naxabiso kwaphela okanye zingabinamsebenzi / zingathandwa kakhulu. Oko kuyakwenzeka.
Nangona kunjalo, iingqekembe ezenza imali ziya kuthi, zibuyisele ilahleko onayo kwiingqekembe ekugqibeleni ezingqineke zingenaxabiso. Iinzuzo ezinkulu oza kuzenza kwiingqekembe eziphumeleleyo ziya kwenza ilahleko yakho kwiingqekembe ezingenamsebenzi ekugqibeleni zibe mbala zingabalulekanga.
Inokwenzeka kangakanani le ngcamango yotyalo-mali?
ICALA LOKUFUNDA KWIIMAKethi ZESITOKO
UJames Altucher kutshanje ukhuphe incwadana yotyalo-mali apho akhankanya oku:
Yenza uphando olunzulu lokuchonga ishishini ngokukhula okubonakalayo; emva koko uthenge izitokhwe ezininzi (ukuba azikho) kushishino.
Kuba indoda egama linguGordon Moore ibhengeze ukuba amandla ekhompyuter aya kuphindeka kabini rhoqo kwiminyaka emi-2, olo qikelelo lubonakalisile ukuba luchanekile, kwanasemva kweminyaka engama-56.
Kwakuthetha ntoni oko ukuba wawusaphila ngoko? Kuthetha ukuba ungatyala imali kwiinkampani zekhompyuter.
Ukuze uqonde, nceda undicaphule ngokuthe ngqo kuAltucher:
“Masithi, ukusukela ngo-1970 ukuya ku-1990 ubeka nje iidola ezili-1,000 100 kwinkampani nganye yeekhompyutha ezili-XNUMX ukuze ubhengeze esidlangalaleni. Kwaye emva koko awubahoyanga kude kube namhlanje.
Oko kuthetha ukuba uza kutyala imali eyi-100,000 iyonke (i-1,000 yeedola kwiinkampani ezili-100).
Iinkampani ezininzi zekhompyuter zaye zabhanga ngeli xesha. Uyayikhumbula ikhompyutha yoKhozi. Okanye i-Commodore?
Okanye i-ElectroData Corporation? Ungamlibala njani ixesha lesithathu ngobukhulu umenzi wekhompyuter? Umenzi weDathaTron 203 ethunyelwe ngexabiso eliphantsi njenge- $ 125,000. Ubunzima bayo buziikhilogram ezingama-3,175 kwaye bunememori engama-4k.
Iinkampani ezininzi ziye zaphela. Kodwa inokwenzeka njani into yokuba ishishini lekhompyuter likhule ngokucacileyo ??
Masithi ngaphandle kweenkampani ezili-100 otyale imali kuzo kwaye ulibale de kube ngoku, i-98 iye yonakala. Masithi kuphela yiMicrosoft kunye neIntel abasindileyo. Iinyani eziyinyani kukuba uninzi olungaphezulu kwe-2 kwi-100 lusindile, kodwa lo ngumzekelo ogqithileyo.
Ke ngaphandle kwe- $ 100,000 yakho yotyalo-mali, i-98,000 yeedola yehle idreyini. Kuphela ziinkampani ezi-2, okanye i $ 2,000 yotyalo-mali osindileyo. Oko kuyanya, akunjalo?
Akulunganga! Ukuba ubusenzile esi sicwangciso, ubuya kuba ne- $ 3,500,000 namhlanje. Ngapha koko uya kuba nokuninzi ngakumbi kuba uninzi lweenkampani lusindile. Kodwa kwakhona, ndiyisebenzisa njengokugqithileyo.
Ukuba utyale imali ngoku kwimveliso ekhulayo kakhulu, nokuba utyala imali encinci, uya kwenza isixa esikhulu semali. Ayisiqhuli le.
Kodwa usenokuthi, "Umzi-mveliso onjengeekhompyuter wenzeka kube kanye kuphela kwiminyaka engama-50."
Ngenxa yokunyuka kwemizi-mveliso yeekhompyuter, iikhompyuter ngoku zenza amashishini abonakalayo. Maninzi kakhulu amashishini akhulayo. ” (Umthombo: Jamesaltucher.com)
IXESHA LOKUTHUMA NGOKUTHUTHA
Uyabona ukuba isicwangciso sotyalo-mali se-crypto esichaziweyo kwesi sicatshulwa sisebenza kulo naliphi na ishishini eliphambili elinokukhula okubonakalayo. Kubonakalisile ukusebenza kwiimarike zesitokhwe, ishishini le-crypto, njl.
Masithathe umzekelo oyinyani, oyinyani. Ndatyala imali engama- $ 200 kwiingqekembe ezi-2 (iidola ezili-100 ngengqekembe nganye), nangaphantsi kweminyaka emi-3 kamva, ingqekembe enye izuze ngaphezulu kwe- $ 11,700 yam; Ngelixa ixabiso lotyalo mali lwe- $ 100 kwenye ingqekembe yehle ukuya kwi- $ 26.
“Ukuba utyala imali kwi-crypto, ke lindela ukuhlala kunye nokungazinzi okukhulu. Akukho maziko aphambili endiwaziyo, nangona kunjalo, athengise utyalo-mali lwabo lwe-crypto, utshilo uGqirha Van Tharp.
Utyalo-mali lwam lwama- $ 200 lwaluxabisa i-11,726 yeedola. Ngaba loo nto yayimbi?
Ngokwenyani awungekhe ulahlekelwe ngaphezulu kwento oyityale kwingqekembe, kodwa ungazuza okuninzi kunoko utyale imali yakho. Nokuba ukuhla kweedola ezingama-74 kwingqekembe yesibini kwakungeyiyo ilahleko yokwenyani yobomi ngaphandle kokuba ndiyikhuphe.
Obo bubuhle botyalo-mali lwe-crypto. Iingqekembe ezilungileyo, ezinokubakho ekugqibeleni ziya kunyuka, ngaphandle kobusika be-crypto kunye neenkqwithela endleleni.
Ndiyingqina eliphilayo kule nyaniso njengoko nam ndaqala ukumanzisa iinyawo zam kwishishini le-crypto kwiminyaka eyadlulayo. Ezinye iimali ezifana ne-BNB kunye ne-ADA zihlawule kakhulu, ngelixa ezinye iimali ezinjenge-ATB kunye ne-ETN ziye zasilela. Ezinye iimali zemali ezifana ne-XRP kunye ne-TRX azenzanga mali imbi kwaye azilahlekanga.
Ekugqibeleni, uya kuvuzwa ngokutyebileyo zii-cryptos ezenza imali.
Olu luvo lotyalo-mali lukhulu ukuba uthenga kwaye ubamba ngonaphakade. Le yeyona ndlela ilungileyo yokwenza imali. Nangona kunjalo, kukho umbulali weqhinga lokutyala ixesha elifutshane eliza kutyhilwa kwinqaku elilandelayo kolu ngcelele.
Eso sicwangciso senza ukuba wenze imali ngokuthatha izikhundla zexesha elifutshane kwiimarike ze-crypto, ugxile kwii-cryptos ezili-100 eziphezulu kuphela. Ukuchaneka kwesicwangciso kuyamangalisa kwaye sesinye sezicwangciso esizisebenzisayo ukwenza imiqondiso kwiijelo zethu zeTelegram.
tags Utyalomali lwe-Crypto, Cryptocurrencies, Iindlela zokurhweba
Isikhokelo sokungenisa kwiToks
Ukuhlaziywa: 3 May 2021
Iithokheni zesitokhwe, ezigcinwe yiBinance, ziiasethi zedijithali ezilandelela ngokuthe ngqo inyathelo lamaxabiso okhuseleko lwemveli, njengamasheya eenkampani ezithengiswa esidlangalaleni. Ezi thokheni ziyimveliso ye-delta-enye exhaswa zizabelo ezibonakalayo, oko kuthetha ukuba ukuhamba kwamaxabiso kwiiasethi eziphantsi kuyaphindaphindwa kwi-tee ngokuphuma.
Ngokungafaniyo nesitokhwe sendabuko, abathengi abanomdla banokuthenga amaqhezu esitokhwe senkampani abayifunayo ngeethokheni zesitokhwe. Umzekelo, izabelo zeTesla (NASDAQ: TSLA) zithengiswa ngaphezulu kwe- $ 700 ngesabelo ngasinye, nangona kunjalo, iithokheni zesitokhwe zivumela abasebenzisi ukuba bathenge isiqwenga se-TSLA (yithi izabelo ze0.01) endaweni yokuthenga iyunithi yonke.
Ukongeza, iBinance ayihlawulisi ikhomishini kwintengiselwano yethokheni yesitokhwe, ivumela abathengisi ukuba bonge imali. Okwangoku, abanini beethokheni bakwafumana izabelo kunye nezinye izinto zokubamba iiasethi zokwenyani. Nangona kunjalo, abanini beethokheni banamalungelo okuvota.
Iimpawu zestokhwe zichaziwe
Iithokheni zesitokhwe zidityanisiwe (umzekelo, i-MSFT / BUSD), ihlawulwe, kwaye yadityaniswa kwi-BUSD, eyenza ukubala kwenzuzo kube lula. Okwangoku, iithokheni zesitokhwe zihlawulwa ngekheshi, oko kuthetha ukuba ukuhlengwa ngokwasemzimbeni kwempahla yexabiso ayinakwenzeka.
Ezi thokheni zigcinwa ngumntu wesithathu, zinika lonke ixabiso lesabelo senkampani edweliswe esidlangalaleni. Ngale nto, amaxabiso ethokheni axhonywa kwixabiso lezabelo ezisisiseko.
Wonke umqondiso uxhaswa kwaye ufakwa kwikhowudi zizabelo ezigcinwe yi-CM-Equity AG eJamani. I-CM-Equity AG ibeke ii-asethi ze-crypto ezifunyenweyo kumrhwebi weqela lesithathu ukuze zigcinwe zikhuselekile. Ukongeza, i-CM-Equity AG iya kubeka iliso kuyo yonke imisebenzi yorhwebo ngeenjongo zokuthobela.
Izinto ezifunekayo kuthengiso lweeTokethi zeSitokhwe
Ngabasebenzisi beBinance kuphela abanokuqinisekiswa kwenqanaba le-KYC, elibandakanya ukungqinisisa i-ID kunye nobuso, abanokuthengisa amathokheni esitokhwe. EJamani, ubuncinci benqanaba lokuqinisekiswa kwe-KYC liyakhuthazwa.
Oko kwathethi, iithokheni zesitokhwe zilungile kubasebenzisi beBinance abafuna ukwahlula iipotifoliyo zabo ngaphaya kwe-cryptocurrency nakwezinye iimarike zotyalo-mali ezinje ngeemarike zemali zesiko. Abasebenzisi abangakwaziyo ukufikelela kubarhwebi bempahla bahlala befumanisa ukuba le nkqubo inzima kodwa banokuthengisa iithokheni zesitokhwe ukufumana ulwazi kunye nokuvezwa kwiimarike zemali zesiko. Olu khetho lotyalo-mali lubaluleke kakhulu kwaye luyaguquguquka kwaye lunokuphucula ukufikelela kwimakethi kubasebenzisi abangenakho ukuhlawula ixabiso elipheleleyo lokuthenga izabelo.
tags Cryptocurrency, iindaba, ISITOKOKI
Umlawuli waseJamani ulumkisa i-Binance yoKhuseleko loMthetho oNgozi ngeTokethi
Ukuhlaziywa: 29 April 2021
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, uBinance ukhuphe iithokheni zesitokhwe esinokungathengiswa ngekhomishini ukunceda ukudibanisa umzi mveliso we-cryptocurrency kunye neWall Street. Nangona kunjalo, umlawuli wezemali ophezulu waseJamani, u-BaFin, ulumkisile ukuba uBinance unokujongana nezohlwayo ezinzima kunye nokuqwalaselwa ngokunikezela amathokheni okhuseleko ngaphandle kokupapasha i-prospectus ye-investor.
Emva kokumiliselwa, utshintshiselwano lwe-behemoth lubhengeze ukuba luya kuvumela abasebenzisi ukuba bathengise i-Tesla kunye ne-Coinbase Global stocks ngokuchasene ne-BUSD yayo yemveli. U-Binance ubhengeze kwakhona ngoMvulo ukuba uza kubonelela abasebenzisi ngesakhono sokuthengisa isitokhwe esongeziweyo, kubandakanya iApple, iMicrosoft, kunye neMicroStr Strategy.
Umlawuli waseJamani uqaphele izolo ukuba kwakungekho themba kwiwebhusayithi yeBinance yeTesla, Coinbase, kunye neMicroStr Strategy. I-BaFin ichaze ukuba intshukumo ka-Binance iyaphikisana nomthetho wezokhuseleko wase-EU kwaye inokutsala isohlwayo se-5 yezigidi zeerandi okanye i-3% yengeniso yenkampani yonyaka ophelileyo.
Ngokwengxelo yeReuters, uBaFin uqaphele ukuba:
“IBaFin inezizathu zokukrokrela ukuba iBinance Germany ithengisa izabelo eJamani ngohlobo 'lwezabelo zethokheni' ngaphandle kokunikezela ngethemba elifanelekileyo. Nceda uqaphele ukuba ukhuseleko lotyalo-mali kufuneka lwenziwe kuphela ngokusekwe kulwazi oluyimfuneko ”.
I-Binance iqinisekisa ukuthobela iimfuno zoMmiselo
Ngomcimbi wokugqibela wokulawula, uBinance uqinisekisile ukuba uzimisele ukuthobela naziphi na iimfuno zolawulo ajongene nazo. Kwi-imeyile eya eBloomberg, isithethi seBinance uJessica Jung uqaphele ukuba:
“I-Binance ithatha uxanduva lokuthobela ngokungathí sina kwaye izinikele ekulandeleni iimfuno zolawulo lwasekhaya naphina apho sisebenza khona. Siza kusebenza nabalawuli ukusombulula nayiphi na imibuzo abanokuba nayo. ”
Inkampani iqinisekisile ukuba iithokheni zayo zesitokhwe ziya kunceda abatyali zimali jikelele bathathe inxaxheba kwizibonelelo zoqoqosho zentsebenzo yesitokhwe kunye nezahlulo.
tags Binance, Cryptocurrency, iindaba, ISITOKO SITOKILE
I-Binance Coin (BNBUSD) amaxabiso okuqhekeka kwe- $ 254 yeXabiso leNqanaba elisezantsi, amaxabiso aQhelekileyo okuThoba kunokwenzeka
Ukuhlaziywa: 26 Matshi 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-Matshi 26
Ukwehla kokuhla kwexabiso kuqikelelwa ukuba iibhere zonyusa uxinzelelo lwazo kwaye inqanaba lenkxaso le- $ 196 lingene, emva koko inqanaba lenkxaso kwi-142 kunye ne- $ 117 linokuvavanywa. Ukuqhekeka kwenqanaba lamaxabiso angama- $ 254 kuyakubonisa ukuba ingqekembe iye kwi-311 kunye ne-364 yexabiso lexabiso.
Intengiso ye-BNB / USD
Amanqanaba okubonelela: $ 254, $ 311, $ 364
Amanqanaba emfuno: $ 196, $ 142, $ 117
I-BNBUSD yexesha elide iTrendar: Bearish
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-BNBUSD i-bearish. Iinkunzi bezingena kuqhubeka nokubamba kwimakethi ye-BNB xa zityhala ingqekembe kwinqanaba lokumelana ne- $ 311. Iibhere zikhusele inqanaba ngokwenziwa kwekhandlela le-bearish yemihla ngemihla, kulandela imeko kukuhla kwexabiso ukuya kwinqanaba lenkxaso kwinqanaba lexabiso le- $ 196 emva kokuba liye laphula umgangatho wangaphambili wenkxaso ye- $ 254.
Itshathi yemihla ngemihla ye-BNBUSD, nge-Matshi 26
Ingqekembe iwele ii-EMA ezimbini kwicala eliphantsi kwaye ithengisa ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA ngelixa eyokuqala izama ukuwela kamva. Olu luphawu lokonyuka kwesantya se-bearish. Ukwehla kokuhla kwexabiso kuqikelelwa ukuba iibhere zonyusa uxinzelelo lwazo kwaye inqanaba lenkxaso le- $ 196 lingene, emva koko inqanaba lenkxaso kwi-142 kunye ne- $ 117 linokuvavanywa. Ukuqhekeka kwenqanaba lamaxabiso angama- $ 254 kuyakubhengeza ingqekembe iye kuthi ga kwiidola ezingama-311 kunye nama-364 eedola kwinqanaba lamaxabiso. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 kunye nomgca wesiginali singaphantsi kwenqanaba lama-50 elalatha njengomqondiso wesiginali yokuthenga enokubuyela umva.
I-BNBUSD yexesha eliphakathi eTrend: Ukuthwala
I-BNBUSD i-bearish kwitshathi yeeyure ezi-4. Kwiveki ephelileyo, i-crypto yayihamba ngokuhamba ngaphakathi kwe- $ 311 kunye ne- $ 254 yenqanaba lamaxabiso. Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi, iibhere zityhala ingqekembe ukuba ingene kwinqanaba lenkxaso kwi-24 yeedola kwicala elingaphantsi kwaye ixabiso lijolise kwinqanaba lamaxabiso eedola ezili-254.
Itshathi ye-BNBUSD yeeyure ezi-4, ngoMatshi 26
Ixabiso lithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ixesha lamaXabiso aMandla aHlanganisiweyo ixesha le-14 likhomba kumanqanaba angama-40 abonisa umqondiso wokuthengisa.
tags IBNBUSD, Marketing, Uhlalutyo Technical
U-Binance Uqesha abaPhathi be-FATF kwi-Bolster Regulatory and Compliance Practices
Olona tshintshiselwano lukhulu lwe-cryptocurrency emhlabeni, u-Binance, ubhengeze ukuba uzakuqesha amalungu amabini e-Financial Action Task Force (FATF) ukomeleza ukuthotyelwa kwawo kunye nengalo yolawulo. Okwangoku kulo mbutho nguRick McDonell noJosee Nadeau.
Utshintshiselwano luphawulwe kupapasho lweendaba kwangoko namhlanje ukuba ijolise ekuphuculeni iindlela zayo ze-AML kunye ne-CFT kunye nokwakha ubudlelwane obungcono nokunyanzeliswa komthetho kunye neearhente zolawulo kwihlabathi liphela.
URick McDonell ngowayesakuba nguNobhala weSigqeba esiSebenzayo sezeMali (i-FATF) kunye noMlawuli oLawulayo kuMbutho weeNgcali eziQinisekisiweyo zoLwaphulo-mthetho eziLawula iMali (ACAMS). Ngeli xesha, uJosee Nadeau wayeyiNtloko yegqiza laseCanada kwiFATF. UBinance uqaphele ukuba iindima zabo kwinkampani ziya kulungiswa ngokubonelela "Isikhokelo esikwinqanaba eliphezulu kuthobelo lombutho kwihlabathi liphela kunye neendlela zolawulo."
Inkampani iphinde yaqaqambisa ukuba amalungu eqela asandula ukongezwa aya kufumana uxanduva "Indima ephambili ekuxhaseni ukubonisana kukaBinance kunye nokunxibelelana nemigaqo-nkqubo yelizwe kunye neyelizwe kunye nabasemagunyeni kwimicimbi echaphazela ishishini lehlabathi ukuqhubela phambili ukukhokela ukusebenza okuzinzileyo nokukhula."
I-blockchain kunye ne-Cryptocurrency Industry ngoku ngoku
Abathunywa abatsha bagqabaza malunga nokuqeshwa, beqaphela ukuba ishishini le-cryptocurrency kunye netekhnoloji ye-blockchain iya isiba yinto ephambili kunangaphambili, njengoko amaziko emali emveli axhokonxa ukubandakanyeka kule teknoloji intsha. Oko kwathethi, ishishini lifuna indlela engqongqo ngakumbi kwimigaqo, kulapho uMcDonell noNadeau bangena khona eBinance "Qiniseka ukuba inenkqubo ehambelana nomgangatho wehlabathi kunye nolawulo lomngcipheko."
Umphathi omkhulu wenkampani, u-Changpeng Zhao, wamkele abaphathi abatsha e-Binance kwaye wathi amava abo adibeneyo kunye nobuchule "Iya kuba nexabiso elikhulu kwiqela lethu njengoko sijonge ukukhulisa iBinance kunye nomzi mveliso ngendlela ezinzileyo."
I-cryptocurrency yesine ngobukhulu ikhuthaze ngamandla kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, nezikhokelele kwiirekhodi eziphezulu eziphezulu. Ngokwengxelo yakutshanje, umthamo wentengiso yemihla ngemihla kwikamva leBinance udlule kwi-100 yezigidigidi zeedola, ixesha elitsha liphela.
tags Binance, I-FATF, iindaba, IMIMISELO
I-CFTC isungula iProbe kwi-Binance kwiiNtengiso zeDerivatives ezingabhaliswanga
Ukuhlaziywa: 12 Matshi 2021
Olona tshintshiselwano lukhulu lwemali ye-cryptocurrency, iBinance, kuthiwa iphantsi kophando yi-US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ngokuvumela abahlali ukuba bathengise ngaphandle kokufumana ubhaliso oluyimfuneko. Nangona u-CEO wenkampani, u-Changpeng Zhao, ephume wabiza isimangalo a "FUD," ayimisanga imarike ye-cryptocurrency ekuthatheni iindaba kwaye yehle kakhulu.
Kutshanje iBloomberg ixele ukuba i-CFTC ivule uphando ukufumanisa ukuba ngaba iBinance yaphule nayiphi na imithetho yase-US. Okubaluleke ngakumbi kukuba, iKhomishini ikhangela inkampani ukuba iqiniseke ukuba ivumela abemi baseMelika ukuba bathengise ngeziphumo ze-cryptocurrency ngaphandle kokubhalisa kakuhle kumbutho.
Nangona kunjalo, ukufumanisa kutshanje kubonisa ukuba uBinance wayengekatyholwa ngokusemthethweni nantoni na kwaye uphando lwangoku lunokukhulula inkampani.
I-CFTC ibona iiasethi ezithile ze-crypto, ezinjengeBitcoin kunye ne-Ethereum, njengezinto zorhwebo kunye nolawulo lwamabango kuwo onke amakamva kunye nezinye izinto ezinxulumene nazo.
Isithethi seBinance kutshanje siphawule ukuba utshintshiselwano luya kuthatha i "Indlela yokusebenzisana ekusebenzeni nabalawuli kwihlabathi liphela, kwaye siyithatha ngokungqongqo imiqathango yethu yokuthobela."
Changpeng Zhao. Umthombo: Google
I-CZ, umphathi we-Binance, uqaphele ngokungangqalanga kwi-Twitter ukuba “Ayiyondawo yentengiso yenkomo ngaphandle kweFUD” kwaye wakhuthaza abalandeli bakhe ukuba bangoyiki ngophuhliso. I-FUD isetyenziswa ngokuxhaphakileyo ukubonisa uloyiko, ukungaqiniseki kunye nentandabuzo.
Intengiso yeDijithali yemali yamaNgqina i-Sharp Drop kwiindaba
I-Bitcoin kunye nayo yonke intengiso ye-cryptocurrency yehle kakhulu emva kokubhengezwa kweprobe. Idigital cryptocurrency yehle kabukhali malunga ne- $ 1,500 ukusuka kwi- $ 56,500 ukuya kwi- $ 55,000.
Ingqekembe yemveli yotshintshiselwano, iBinance Coin, iye yanzima ngakumbi kwiindaba. I-BNB kuthiwa iwele malunga ne-10% phantsi kwemizuzu embalwa.
tags Binance, CFTC, Cryptocurrency